DHAGEYSO: Maxaa ka jira in Barre Hiiraale uu ku baaqay in la taageero Al-Shabaab, hal sabab darteed!? + XOG | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Maxaa ka jira in Barre Hiiraale uu ku baaqay in la...
DHAGEYSO: Maxaa ka jira in Barre Hiiraale uu ku baaqay in la taageero Al-Shabaab, hal sabab darteed!? + XOG
Baladweyne (Halqaran.com) – Koloneyl Barre Aadan Shire (Barre Hiiraale) oo mar soo noqday wasiirkii gaashaandhigga Soomaaliya ayaa wareysi gaar ah waxaa uu siiyay idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho, waxaa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga, dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo dhibaatada ciidamada Kenya ka geystaan dalka.
Barre Hiiraale ayaa si layaab leh u sheegay in ay muhiim tahay in xilligan gacan la siiyo Al-Shabaab, si buu yiri loola dagaalamo ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya.
Mr. Barre ayaa arrintan sabab uga dhigay in dowladda Kenya ay duulaan ku tahay dalka soomaaliya, awoodda jabin kartana ay tahay dagaalamayaasha Al-Shabaab, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale, Barre Hiiraale ayaa sheegay in gacmo shisheeye ay faraha kula jiraan arrimaha Soomaaliya, islamarkaana ay dhib badan ku hayaan qarannimada umadda Soomaaliyeed.
Ugu dambeyn, Barre Hiiraale waxa uu sheegay in Soomaaliya ay iminka haysato dhibaato ka badan Al-Shabaab oo ah ciidamada Kenya, sidaas darteedna ayaga lagu taageero inay ka adkaadaan Al-Shabaab.
hal sabab dartii
in la taageero Al Shabaab